Indlu enomtsalane kumbindi weSunne
Nam, uhlala kumbindi weSunne - kufutshane nezinto ezininzi kwaye kwangaxeshanye kumgama kwingxolo yendlela. Indlu ivela kwi-1923 kwaye indlu ihonjiswe ngokuthandekayo ngokugxila ekusetyenzisweni kwakhona kunye nezinto zendalo. Kukho indlu yangasese yangasese eneshawa kunye nekhitshi layo elinefriji, ifriji kunye neketile. Ikofu / iti iyanikezelwa. Umnyango wabucala.
Isidlo sakusasa se-Organic sinokulungiselelwa. Emva koko ukutya kufakwa efrijini ukuze kuphake ngokwakho. Iindleko ziya kongezwa.
(Ngenxa yeeprojekthi ezahlukeneyo zangaphandle, ngoku kumdaka kancinci endlwini.)
Ungayipaka imoto yakho kwindawo yokupaka yendlu.
Indawo yokulala isembindini kunye neevenkile ezikumakhulu ambalwa eemitha kude. Nangona kunjalo, kuthe cwaka kwisitrato ngaphandle, njengoko iimoto zihamba ekuseni nangokuhlwa. Uluntu olusempilweni lukhululekile kunye nezindlu ezininzi ezindala embindini kunye neevenkile ezincinci kunye neendawo zokutyela. ILake Fryken, eyahlula iSunne ibe ziziqingatha ezibini, inika umtsalane owongezelelekileyo ngeentaka zolwandle kunye nokuhamba ngesikhephe ehlotyeni.
Ndihlala ndedwa nosapho lwam kunye nenja yethu encinci kwinxalenye yendlu. Ndiyavuya ukuba senkonzweni ukuba ufuna uncedo ngayo nantoni na. Ndithetha isiNgesi esilungileyo kunye nesiJamani esincinci.